Africom oo sheegtay in duqeymo ku Dileen dagalamayaal ka tirsan kooxda Shabaab ah – Walaal24 Newss
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeymo ay ka geysteen 48-diii saac ee la soo dhaafay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ay ku dileen 15 ka tirsan dagalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab.
War-qoraal ah oo taliska ka soo baxay ayaa lagu soo qoray barta Twitter ay ku leeyihiin, in duqeyn hore oo 6-dii bishan February ka dhacday meel ku dhow deegaanka Bariire ay ku dileen 11 ka mid ah dagalamayaal Al-Shabaab.
Talisku waxa uu sheegay in duqeyn kale oo 7-dii bishan iyana ka dhacday meel ku dhow deegaanka Gendershe ay ku dileen afar ka mid ah dagalamayaal Al-Shabaab.
Al-Shabaab Degraded by U.S., Federal Government of Somalia – https://t.co/abVyuDHdyr pic.twitter.com/DABTjoY3C1
Duqeymihii ugu dambeeyay ayey ka filyeen gobolada Jubada Dhexe iyo Hiraan kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan boqol dagaalyahano Al-Shaabab ka tirsan.
Soomaaliya oo martigelineysa ciyaar caalami ah 30 sano kaddib ka dhaceyso magaalada Muqdisho